မြန်မာဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့ | AnZarTone
by AnZarTone မြန်မာဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့
နည်းပညာ သတင်းတွေ၊ ပညာရေး သတင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ဂျာနယ်စာစောင် တစ်ခုပါပဲ။ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ ဒီဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်က အရင်ထက် အများကြီး ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ – http://www.myanmarinternetjournal.com/
မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ရဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာကတော့ …http://www.myanmar.mmtimes.com/
Envoy ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနိမ်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာကို မတွေ့ရပါဘူး။ Blogger နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တော့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကိုယ်ပိုင် ဒိန်မိန်းနဲ့ တည်ဆောက် ထားသင့်ပါတယ်။ ဒိုမိန်းတစ်ခုမှ တစ်နှစ်စာ တစ်သောင်း ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ Hosting မဝယ်နိုင်သေးရင်တောင် ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနဲ့ ချိတ်ပြီး ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ပိုပြီး ကောင်းနိုင်တာပေါ့။ ဒါက ကျနော့်အမြင်ပါ။ ဒီ Envoy ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းမှာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ ခုတော့ နားထားရတယ် ဆိုလားပဲ။သူ့လိပ်စာကတော့ – http://envoy-news.blogspot.com/
ပြည်မြန်မာဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်ကိုတော့ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တွေမှာ ဖြန့်ချိလေ့ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ လိပ်စာကတော့ – http://swesonemedia.org/
YangonTimes ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ – http://www.theyangontimes.com/
အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာ ဖြန့်ချိလေ့ရှိတဲ့7Day News ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ – http://www.7daynewsjournal.com/
The Voice Weekly ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆိုက်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Font ကတော့ Zawgyi-one မဟုတ်ပါဘူး။ Myanmar3 ကို အသုံးပြုထားတယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုက်ကို Wide Screen မော်နီတာနဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ 800×600 မော်နီတာ တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီး အဆင်မပြေလှပါဘူး။လိပ်စာကတော့ … http://www.thevoicemyanmar.com/
Popular Journal ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက .. http://popularmyanmar.com/
မြန်မာပို့စ် ဂလိုဘယ် ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ .. http://www.themyanmarpostglobal.com/
စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက … http://newswatchjournal.com/
Hot News ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက .. http://www.hotnewsweekly.com/
မြန်မာနိုင်ငံ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက … http://myanmar.com/
ဈေးကွက် ဂျာနယ်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ … http://www.zaygwet.com/
အလင်းတန်း ဂျာနယ်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ .. http://shweamyutay.com/
ဂျာနယ် များစွာရဲ့ စုပေါင်း သတင်းတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ … http://www.yoyarlay.com/
Collected by မဟာရာဇာ အံစာတုံး
This entry was posted in Blog and tagged ဂျာနယ်. Bookmark the permalink.
← ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင်	ချစ်သော စံပါယ် →
4 thoughts on “မြန်မာဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့”	sandakyawswar October 14, 2012 6:37 am ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သိတာရှိရင်လည်းပြောပါ့မယ်
nyanpawin35 October 15, 2012 11:43 am Think You So Much.
အသင်္ခရာထွန်း February 19, 2013 2:58 am ကျေးဇူးပြု၍မေးလ်ထဲထဲကိုပို့ပေးပါ။
thetoolwin October 23, 2013 1:17 am ကောင်းပါတယ်